Uyithengisa njani intengiso yedijithali kwiFanele yokuThengisa | Martech Zone
Xa amashishini ehlalutya intambo yawo yentengiso, into abazama ukuyenza kukuqonda ngcono isigaba ngasinye kuhambo lwabathengi babo ukufumanisa ukuba zeziphi iindlela abanokufeza ngazo izinto ezimbini:
ubungakanani -Ukuba intengiso inokutsala amathemba angakumbi emva koko inokwenzeka into yokuba amathuba okukhulisa ishishini labo aya kunyuka ngenxa yokuba amaqondo okuguqula ahlala eqinile Ngamanye amagama… ukuba nditsala i-1,000 5 ethembiso ngakumbi ngentengiso kwaye ndine-50% yenqanaba lokuguqula, oko kuyakulingana nabathengi abangama-XNUMX.
Ukuguqulwa -Kwinqanaba ngalinye kwiteli yokuthengisa, ukuthengisa kunye nentengiso kufuneka zisebenze ukwandisa izinga lokuguqula ukuqhuba ngakumbi amathemba kuguquko. Ngamanye amagama, ukuba nditsala la mathuba ayi-1,000 6 kodwa ndikwazi ukunyusa izinga lokuguqula ukuya kwi-60%, oko kuya kulingana nabathengi abangama-XNUMX.
Uyintoni umsebenzi weNtengiso?
Ifanele yokuthengisa kukubonakaliswa okubonakalayo kwenani lamathemba onokuthi ufikelele kuwo ngokuthengisa kunye nokuthengisa ukondla lweemveliso okanye zenkonzo yakho.
Zombini iintengiso kunye nentengiso zihlala zixhalabile ngefaneli yentengiso, zihlala zixoxa ngamathemba anjalo kumbhobho Ukuchaza indlela abanokuthi bakwazi ngayo ukuqikelela ukukhula kwengeniso yexesha elizayo kwishishini labo.
Ngokuthengisa kwidijithali, ulungelelwaniso phakathi kwentengiso kunye nentengiso lubalulekile. Ndiyasithanda esi sicatshulwa kwenye yeepodcast zam zamva nje:
Ukuthengisa kuyathetha nabantu, ukuthengisa kuyasebenza nabantu.
Ingcali yakho yokuthengisa ineengxoxo ezixabisekileyo kunye nethemba mihla le. Bayaziqonda iinkxalabo zeshishini labo kunye nezizathu zokuba inkampani yakho ilahlekelwe zizivumelwano nabantu abakhuphisana nabo. Kunye nophando lokuqala kunye nolwesibini kunye nohlalutyo, abathengisi banokusebenzisa olo lwazi ukondla iinzame zabo zentengiso yedijithali… ukuqinisekisa ukuba ithemba kuwo onke amabakala efaneli linomxholo oxhasayo ukunceda ithemba liguqulele kwinqanaba elilandelayo.
Amanqanaba okuthengisa okuNceda: UkuThengiswa kweDijithali kubondla njani
Njengoko sijonga onke amajelo kunye namajelo esinokuthi siwadibanise kwisicwangciso sethu sonke sentengiso, kukho amanyathelo athile esinokuhambisa ukukhulisa kunye nokuphucula inqanaba ngalinye lefaneli yentengiso.
Intengiso kunye eendaba ezuziweyo ukuqhuba ukwazisa ngeemveliso kunye neenkonzo ezibonelelwa lishishini lakho. Intengiso yenza ukuba iqela lakho lentengiso lisebenzise abaphulaphuli abafanayo kunye namaqela ekujolise kuwo ukubhengeza nokwakha ulwazi. Iqela lakho leendaba zentlalo linokuvelisa umxholo owonwabisayo kunye nokunyanzelisayo okwabelwana ngawo kunye nokuqhuba ulwazi. Iqela lakho lobudlelwane noluntu libeka abachaphazeli kunye nemithombo yeendaba ukufikelela kubaphulaphuli abatsha nokwakha ulwazi. Usenokunqwenela ukungenisa iimveliso kunye neenkonzo zakho zamabhaso ukuqhuba ulwazi ngamaqela oshishino kunye nokupapashwa.
Abantu banomdla njani kwiimveliso zakho okanye iinkonzo ezibonisa umdla? Kule mihla, bahlala bezimasa iminyhadala, bethatha inxaxheba kumaqela oshishino, bebhalisela iincwadana ezincedisayo, befunda amanqaku, kwaye bekhangela uGoogle kwiingxaki abafuna isisombululo. Inzala ingabonakaliswa ngokucofa kwintengiso okanye ukuthunyelwa okuzisa ithemba kwiwebhusayithi yakho.
Ukujonga imveliso yakho ngumba wokuvavanya iimfuno, iindleko, kunye nedumela lenkampani yakho kunye nabantu abakhuphisana nabo. Ngokwesiqhelo eli linqanaba apho ukuthengisa kuqala ukubandakanyeka kunye nokuthengisa izikhokelo ezifanelekileyo (IiMQL) ziguqulwa zangumkhokeli ofanelekileyo wentengiso (Ii-SQL). Oko kukuthi, amathuba anokuthelekiswa neeprofayili zakho zedemografi kunye neefagagrafiki ngoku zibanjiwe njengezikhokelo kwaye iqela lakho lokuthengisa liyabafanelekela kumathuba abo okuthenga kunye nokuba ngumthengi omkhulu. Kulapho ukuthengisa kunetalente emangalisayo, ukubonelela ngamatyala okusetyenziswa, ukubonelela ngezisombululo, kunye nokunkqonkqoza phantsi kwazo naziphi na iinkxalabo ezivela kumthengi.
Ngokoluvo lwam, inqanaba lesizathu lelona libalulekileyo ngokwexesha lokujonga. Ukuba ngumsebenzisi okhangela isisombululo, ukukhululeka apho ufaka khona ulwazi lwabo kwaye ufumane ukuba abathengisi bakho babalandele kubalulekile. Ukhangelo abalusebenzisileyo lubonelele ngenjongo yokuba bafuna isisombululo. Ixesha lokuphendula ukukunceda nalo libalulekile. Kulapho ucofa-ukuya-umnxeba, iimpendulo zefom, i-bots bots, kunye ne-bots ephilayo ezenza ifuthe elikhulu kumanqanaba okuguqula.
Uvavanyo linqanaba apho intengiso iqokelela khona ulwazi oluninzi olunokubeka ithemba ngokukhululekileyo kwisisombululo esifanelekileyo. Oku kungabandakanya izindululo kunye neenkcazo zomsebenzi, uthethathethwano lwamaxabiso, ulayini obomvu wekhontrakthi, kunye nokuayina naziphi na ezinye iinkcukacha. Eli nqanaba likhule kunye nezisombululo zentengiso kule minyaka imbalwa idlulileyo- kubandakanya imiqondiso yedijithali kunye nokwabelana ngamaxwebhu kwi-intanethi. Kukwabalulekile ukuba ishishini lakho libe negama elihle kwi-Intanethi njengoko iqela labo elakha isivumelwano liya kuthi lingene kwaye liphande inkampani yakho.
Inkqubo yokuthenga engenamthungo ibaluleke kakhulu ekuhlolweni kwe-ecommerce kumthengi olungileyo njengoko kunjalo kwinkampani yeshishini. Ukukwazi ukwenza ityala ngokulula kunye nokuqokelela ingeniso, ukunxibelelana namava okukhwela, ukuthumela ukuthunyelwa okanye ukuthunyelwa kokulindelweyo, kunye nokuhambisa ithemba kumthengi kufuneka kube lula kwaye kunxibelelwane kakuhle.
Yintoni engabandakanyi iFunnel yeNtengiso?
Khumbula, ujoliso lwefaneli yentengiso kuguqula ithemba libe ngumthengi. Ayisiyonto idlula leyo ngaphandle kwamaqela entengiso anamhlanje kunye namaqela entengiso aphendula kumava abathengi kunye neemfuno zokugcina abathengi.
Kukwabalulekile ukuba uqaphele ukuba ifanele yentengiso yinkangeleko ebonakalayo yeenzame zombutho wakho wentengiso kunye neqela lezentengiso… ayibonisi olona hambo lwabathengi. Umthengi, umzekelo, unokuhamba emva nangaphambili ngaphakathi kohambo lwabo. Umzekelo, ithemba linokukhangela isisombululo sokudibanisa iimveliso ezimbini ngaphakathi.
Ngelo xesha, bafumana ingxelo yomhlalutyi ngohlobo lweqonga abalifunayo kwaye bakuchonge njengesisombululo esisebenzayo. Oko kuqale ulwazi lwabo nangona sele benenjongo.
Ungalibali… abathengi bahamba ngakumbi nangakumbi kwiinkqubo zokuzenzela iinkonzo kuvavanyo lokuthenga kwabo okulandelayo. Ngenxa yoku, kubalulekile ukuba umbutho wakho ube nelayibrari yomxholo ebanzi yokubaxhasa kuhambo lwabo kunye nokuziqhubela kwinqanaba elilandelayo! Ukuba wenza umsebenzi omkhulu, ithuba lokufikelela ngakumbi kunye nokuguqula okuninzi kuya kwenzeka.
tags: b2b ifanele yokuthengisangqalelovavanyongenjongoumdlathengaUkunika amandla ukuthengisayokuthengisaizigaba zefaneli zentengisosqlyintoni ifaneli yokuthengisa